Mpanamboatra sy mpamatsy milina fanodinana horonantsary China PE / PP | Masinina manankarena
Milina Pelletizing plastika
Masinina manery ny sarimihetsika plastika
Single shaftder shaftder tokana / roa
Tsipika fanasana plastika
Sodina plastika / tsipika Extruder profil
Masinina mamintina sarimihetsika PE / PP
Ity dia milina plastika vaovao, manokana ho an'ny fanodinana plastika sy ny tsipika fanasan-damba, afaka manolo ny masinin'efera izy io, ny milina fanamainana, aorian'ny horonantsary avy amin'ny fanasana fikorontanana lehibe. Rehefa manao granules dia tsy mila compactor koa izy io. Hamonjy ny vidin'ny milina sy ny heriny bebe kokoa.ary mora fehezina.
Hevitra famolavolana ankapobeny toy ny etsy ambany:
1. barila milina fanesorana tsy ilaina amin'ny fitsaboana amin'ny 38Crmoal, satria ny ampahany fricton dia eo an-doha.
Saingy mila fitsaboana mafana. (Ampahany amin'ny fanafanana 38Crmoal)
2.Ny famolavolana masinina fametahana, eo ambonin'ny tany, ny barika dia handavaka lavaka kely kokoa. Lavaka anatiny manodidina ny 3mm, ivelany manodidina ny 6mm.
Ka io famolavolana io dia azo antoka fa tsy hianjera amin'ny fitaovana rehefa misy tsindry mafy ao anatiny.
3. Ankoatra ny barilan'ny masinina mametaka dia manana 5 pcs Keyway, (karazana 300 ny sary, manana 6 pcs Keyway),
ity lahasa Keyway ity dia miantoka ny fanodinana ny bokotra rawmaterial amin'ny visy.
4.Ny milina fanosotra Screw material dia tsy maintsy amin'ny 38Crmoal, avo lenta, fanoherana tsara abrasion.
Famolavolana masinina 5.Squeezing ataon'ny TWO-IN-ONE, amin'ny vidiny ambany indrindra.
6.Ny lavaka bobongolo ny milina manenjika dia azo ovaina
raha misy antsipiriany mahaliana, mifandraisa amin'i info@zjgrcmc.com
Ity masinina ity dia mandray ny fitsipiky ny tsy fahampian-drano, izay manadio ny sarimihetsika plastika (sarimihetsika plastika, mulch film fambolena, kitapo tenona PP, kitapo hoditra bibilava, kitapo habakabaka, kitapo taonina, plastika fako plastika manify) Fitaovana fanosehana ny rano ao anaty plastika. Fitaovana fanodinana volo rotary, reducer manokana, fitaovana mandeha ho azy tanteraka amin'ny fametahana sy fanodinana horonantsary plastika, mulch film fambolena, kitapo vita amin'ny kitapo PP, kitapo hoditra bibilava, kitapo habakabaka, kitapo taonina, plastika fako plastika manify sns. Ity masinina ity dia mandray ny fitsipiky ny famonoana tsy fahampian-drano ary ampiarahana amin'ny fitaovana fihodinam-bokatra mba hanery sy hamonoana ilay sarimihetsika plastika. Ny fahombiazan'ny fametahana sy ny tsy fahampian-drano dia haingana ary tsara ny vokany. Mora ampiasaina ity masinina ity, ny fihenan-tsakafo sy ny tsy fahampian-drano dia mety hahatratra mihoatra ny 95%, ary ny vokatra dia azo ampanjifaina arakaraka ny takian'ny mpanjifa.
1. Ny fitsipiky ny tsy fahampian-drano tsy manam-paharoa mamaha ny olana sarotra amin'ny tsy fahampian-drano plastika toy ny horonantsary;
2. Vokatry ny fanenjehana tsara: azo antoka mihoatra ny 95%;
3. Teknolojia Taiwanese, vita any Chine, lafo vidy tokoa;
4. Ny tsy fahampian-drano amin'ny fitrandrahana mekanika, raha ampitahaina amin'ny fanamainana ny rivotra mafana tany am-boalohany, dia mamonjy angovo betsaka;
Previous: extruder visy kambana mifanila
Manaraka: Voalefaka PP notsofina
milina fanodinana taratasy vita amin'ny milina fanodinana taratasy
milina fanenjehana horonantsary
300kg / h milina fanenjehana horonantsary
300kg / h kitapo tenona milina manempotra
Tsy misy rafitra fanapahana milina
IANAO VE TORUIO